Michael P. Thijs H. Jos B. nenyaya dzekuuraya mhizha dzinotungamirira mukusvitsa kwakakurumidza kwekutya mitemo inobata munhu wose: Martin Vrijland
Dhiyabhorosi takaparidzira mifananidzo yevhidhiyo pamusoro pemhosva yeAlin Faber, umo "baba vaAnne" vakataura. Kutaura zvazviri, yakanga iri gakava umo tsitsi dzaiwaniswa nekuda kwekubviswa kwemazita mazhinji sekukwanisa kubva kune mhondi inotyisa seMichael P. "Baba vaAnne" vakatsamwa zvokuti haazofungi kana Michael P. achizviuraya.
Ndikaisa zita rokuti "baba vaAnnif Faber" mumashoko ekudzokorora, nokuti kana tiri kutarisana pano ne PsyOp (kushanda kwepfungwa) umo kusangana kwaAri kwave kushandiswa nenzira dzezvakadzika-cheka, Anne Faber haapo uye panguva iyoyo baba mutambi (saamai, baba, shamwari, etc.). Hatigoni kutaura zvakananga ne100% kana kutaura kwakadaro mumatare ichokwadi kutaura mumatare kana kuti tiri kutarisa ANP John de Mol TV kubudisa nekudzika.
Unhu hwekudzidzira teknolojia ndeyekuti iwe unogona kugadzira munhu kubva pakutanga kuburikidza neAI (mazano ekugadzirira) software. Iwe unogona kuisa pamwe chete nhoroondo yose, kusanganisira mifananidzo nemavhidhiyo. Izvi zvatova nyore chaizvo nemapurogiramu ezuva ranhasi kuti kune kakatova maitiro ekutengeserana pamusika unoshandisa zvikamu zvekombiyuta iyi mu smartphone apps.
Semuenzaniso, unogona kubata hurukuro nemuitevedzeri uye uvhare inzwi uye chiso cheumwe (kana wekudzika) mune video yehupenyu iripo. Hapana achaona kusiyana. Iwe unogona kuita zvakafanana nemapurogiramu ezvehuwandu hwemagariro evanhu uye network yavo yevamwe shamwari. Wakagadzira ma profiles, akazadza neshamwari dzako, shamwari dzemhinduro. mapikicha nemavhidhiyo, unogona kushandisa se hondo ye troll iyo inotarisa matongerwo ose emagariro evanhu. Aya ndiwo "vanhu" vatinoona vachionekwa mukukurukurirana pamusoro pe Facebook neforamu. Vanhu vanoti vanoti vanoziva kana vangaziva mumwe munhu anoziva munhu wacho zvakanaka kana ave aripo mukirasi; etcetera. Iko ihondo ye troll inofanirwa kuongorora PsyOps online mune zvekutaurirana.
Mune mhaka dzekuuraya mhepfenyuro nhasi, tinoona kubvira pakutanga kuti ivo vanoreva kutamba vanhu nenzira iyo vanogamuchira mutemo mutsva wavasingazogamuchiri. In ichi chinyorwa Ndinotsanangura izvozvi zvakadzama (kusanganisira tsanangudzo pamusoro pe deepfakes).
Muzviitiko zvose zvaAnf Faber, Nicky Verstappen, Michael Panhuis, Thijs H., Jos Brech (kana nemamwe mazita aya akanyorwa mupfungwa dzako), tinogara tichiona kuti inotungamirira kumutemo mutsva uyo pasina munhu asina mhosva idzi dzinouraya chinetso chikuru. Muchikamu chinotaurwa (chengeta pahutano) Ndinotsanangura kuti sei mu PsyOp munyaya yacho Dambudziko, Reaction, Solution inoshandiswa kupfurikidza nemutemo mutsva. Ndinoratidza kuti iwe uri nyore sei iwe unogona kuisa pamwe PsyOp neyozvino magetsi. Iwe unogadzira, sezvazvakaita, dambudziko rega-rakagadzirwa (mhosva yekuponda ine simba guru), iwe unotamba vanhu nepamwero wakawanda kuburikidza nevanhau mumhepo yavo, kuitira kuti vakagadzirira kupinda muchikamu chekupedzisira; avo vauri kubvuma kutyisa mitemo iyo ivo pachavo vanogona kubata.
Mhosva yeT Thijs H. inofanira kutungamirira kugadziriswa kwevashandi vanovanzika mumasangano umo vanhu vari "kutarisira utano hwepfungwa", nokuti Thijs H. Anoramba kuponda, asi akasvika nemaoko ane ropa uye zvipfeko paGGZ sangano Vijverdal muHeerlen. Saka pane humwe uchapupu, asi izvi zviri mumhando yekutaura kwaTejs H. kumupfungwa uye haabvumirwi kutaura chero chinhu. Mune iyi PsyOp inoratidzika seine chigadziro chakasikwa nemaune umo Thijs H. asingagoni kutongerwa kana chiremba chepfungwa asingabvisi chivande chake. Ndizvo izvo PsyOp inofanira kutungamira kune: kubviswa kwebasa rakavanzika. Nyaya yaT Thijs H. ichabatsirawo kuve nechokwadi kuti vanhu vanoita pfungwa yakavhiringidzika vanogona kuvharwa kuti vaone pasina kupa chikonzero uye pasina kupindira kwechiremba chepfungwa ( Edith Schippers musungo).
Anne Faber - Mhosva yaMichael P. yaifanira kutungamirira kugamuchirwa kwemutemo pamusoro pekutongerwa kuTBS kunze kwekufungidzirwa kwekuda kubatanidzwa mukuongorora kwepfungwa. Inofanirawo kunge inotungamirira kuhupenyu hwose (TBS) uye zvichida kunyange kubviswa kwekodzero yekukwirira. Chido chokubviswa kwekodzero iyoyo chakavanzika mune fungidziro yehupupuriro ye shamwari yaAnn Faber's (Natani Fidder). Gweta rake rakataura.
Dare raJos Brech raifanira kutungamira kugamuchirwa kwekushandiswa kweDNA, iyo iyo DNA yakawanikwa mune imwe nyaya yakasiyana pane iyo yaanoshungurudzwa iri kutsvakwa. Kutaura zvazviri, kwaive kuiswa kwekodzero yekuwana kusingabvumirwi kweDNA uye kushandiswa kusingagadziriswi munyaya dzepamutemo. Mukuwedzera, vanhu vakaunzwa nekuwedzera mukugamuchira kugadzirisa nzira yekusika kweDatabata reNational DNA (ona pano tsanangudzo).
In iyo yakataurwa nenyaya, iyo ini ndinopa tsanangudzo yakawanda pamusoro pezvisikwa zvekunyora vanhu, ndinotsanangurawo kuti ANP (iyo General General Press Office) iri mumaoko evhidhiyo muterevhizheni. Tiri kutaura nezvemabhiriyoniire John de Mol. Saka hazvifaniri kuuya sechishamisika kuti kana iwe ukaona mifananidzo mumasvikiro, izvi zvinongoratidzira mafirimu. Zvose zvinokurumidza uye zviri nyore kugadzira ne software uye studio techniques. Muoni haazvioni izvi uye anofunga kutarisa mashoko chaiwo. Ndizvo zvaunoita mukushanda kwakanaka kwepfungwa. Munguva iyi, vanhu vanogutsikana nemashumo akafanana kuti nhau dzisina kururama uye mauto ehondo dzinouya chete kubva kuRussia, uye saka munhu wose anotenda zvakare nhau.
Zvisinei, zvinogoneka kuti Anne Faber haana kumbovapo, asi inowedzera kubudisa.
Source chinyorwa listings: nu.nl, 1limburg.nl
Tags: Anne, dzikadzika, deepfakes, Faber, Fidder, kukwidza, Michael, Nathan, P., Pan imba, tbs, baba, shamwari
Hey John de Mol! Kana tikazozogara mujeri rezvemagariro ehurumende, ine rusununguko rwekudzivirira mitemo, uko vanhu vasina ngoni vanogona kupera muGulag uye vana vedu vose vadarika, tinogona here kuuya nekukudzingai kunze kwemuzinda wenyu mukuru?
Die Gorsse Lüge: ramba uchidzokorora nhema uye munhu wose achazvitenda.
Uye saka PsyOp spin vanachiremba vanongotanga kubuda mutsva:
Aiwa, chero chinhu chinogona kuitika kuMadurodam. Izvo zvisingaiti zvinogoneka, zvinoita hazvibviri.
Zvichienderana nezvinonzi Spin Doctors, uye zvinongotungamirira ...
Ndeipi munhu anonyadzisa Ivo.
« Davina Michelle uyo anotevera transgender paEurovision Song Contest? Duncan Laurence anoona candidacy!
Iyo inonakidza korani yeMarco Borsato muKuip kuRotterdam! »
Total Visits: 15.830.916